ကြည့်ရှုသူတွေ မျက်လုံး ပြူးပြဲ ထွက် သွားလောက်အောင် ရင်နှစ်မွှာ အကိတ်လေးတွေ ပြသ လိုက်တဲ့ XMUE XMUE…. – Shwe Naung
ကြည့်ရှုသူတွေ မျက်လုံး ပြူးပြဲ ထွက် သွားလောက်အောင် ရင်နှစ်မွှာ အကိတ်လေးတွေ ပြသ လိုက်တဲ့ XMUE XMUE….
N N | June 28, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ photo model အမှူး က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်ကို တင်ပေး လေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင် လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိပြီး ချစ်စရော ကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူ ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အခါမှာ လည်း ပိုက်ဆံ ရှိဖို့မ လိုဘူး မောင်လေး ရှိရင်….အမှိုက် ကောက်ရလဲ ဖစ်တယ်နော် ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေ ထားတာဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော
မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရ ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြ လေ့ရှိပါတယ်။
သူမကတော့ ယခုမှာ အသည်းယား လောက်အောင် ဆွဲဆောင် မှုရှိလွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွားစေ ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် မော်ဒယ် အမှူးရဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ် လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
M ဆိုင်းလု ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး……
ရေ များများ သောက်ပါ’ ဆိုပြီး ရွှေ ရ င် အ စုံတ င်း ခါနေ တဲ့ပုံ လေး တွေ တ င်ပေးလို က် တဲ့ မျ က်ဝ န်း
အဖြူရောင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်…….